Wararka - Xisaabinta Qiimaha ASRS: 5 Qodob oo wax ku biirinaya
Xisaabinta Qiimaha ASRS: 5 Qodob oo wax ku biirinaya
Qiimaha ugu cad ee wax ku biirinaya xalka ASRS waa qiimaha qalabka/teknoolajiyada aad ugu dambeyntii doorato.Nidaamka ASRS ee weyn ama aadka u khaaska ah waxaa laga yaabaa inay jiraan kharashyo horudhac ah oo loogu talagalay falanqaynta nidaamka iyo naqshadaynta si dib loogu habeeyo xaruntaada si loo kordhiyo faa'iidooyinka otomatiga, laakiin waa kuwan arrimaha ugu waaweyn ee saameeya qiimaha qalabka laftiisa:
Cabbirka Nidaamka - Nidaamyada ASRS waxay caadi ahaan ka kooban yihiin qayb la dhaqaajin karo (geliye/saariyaha, wiishka la dhaqaajin karo, nidaamka gudbinta robotiga) iyo meel kaydinta taagan (shalefyada, racks, bins).Xeerka suulka ayaa weynaada oo aad tagtaa waa yaraanta kharashka cag cubic.Tani waa sababta oo ah qaybaha dhaqaaqa ayaa ah qaybta ugu qaalisan nidaamka.Meesha bakhaarku waa mid taagan oo ka kharash yar in la balaadhiyo.Markaa qiimihii cag-jiifkiiba wuxuu hoos u dhacaa marka cabbirka unuggu kordho.
Deegaanka – bay'ada tignoolajiyadu ku shaqeyso waxay sidoo kale saameyn doontaa qiimaha cutubka - qolka nadiifka ah iyo jawiga cimilada la xakameeyey (qabow, kulul, qalalan) ayaa kordhin doona qiimaha cutubka.Marka lagu daro bay'ada ku dhex jirta unugga, goobta xaruntaadu waxay u baahan kartaa unugga inay buuxiyaan shuruudaha seismic ee aagagga dhulgariirka.
Alaabooyinka la kaydiyay - cabbirka jirka ee alaabtaada - gaar ahaan alaabta dheer ama weyn - waxay kordhin kartaa qiimaha mashiinka.Miisaanka alaabta la kaydiyay ayaa laga yaabaa inay u baahdaan mishiin culus oo leh saxaarad ama weel ka xoog badan.Alaabooyinka u baahan in si gaar ah loo maareeyo - sida kiimikooyinka halista ah iyo dareeraha, alaabada caafimaadka noolaha, elektiroonigga (ESD), alaabta cuntada iyo dawooyinka - waxay kordhin karaan qiimaha xalka ASRS.
• Xakamaynta mishiinada - kharashka kontoroolka mishiinku wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xidhan nooca tignoolajiyada.Guud ahaan marka la eego, qaybaha dhaqdhaqaaqa badan iyo nidaamka ballaaran - ayaa kor u kacaya kharashka xakamaynta.
Isticmaalka loo baahan yahay - xawaaraha aad ugu baahan tahay inaad ka soo saarto badeecooyinka kaydsan ee nidaamka waxay saameyn doontaa qiimaha;Dabcan sida ugu dhakhsaha badan ee wax-soo-saarka (waqtiga lagu soo celinayo/qaadanayo shay kaydsan nidaamka) ayaa kor u kacaya qiimaha.
Inta badan ASRS waxay ku siin kartaa maaraynta agabka aasaasiga ah ee kontaroolada dushiisa.Heerarka kala duwan ee software maaraynta alaabada ayaa lagu dari karaa kordhinta xakamaynta alaabada iyo awooda dalbashada.Badi software-ka maareynta alaabada waxaa lagu heli karaa xirmooyin heersare ah halkaasoo qiimuhu kordho marka aad ku darto astaamo badan.Tani waxay u ogolaanaysaa xal nus-customizable inta badan oo waxay kaa ilaalinaysaa inaad bixiso sifooyinka aadan u baahnayn.
Hawlgallada horumarsan ee dheeraadka ah, software-ka maareynta agabka ayaa si toos ah loogu dhex milmi karaa WMS ama nidaamka ERP ee jira.Tignoolajiyada ASRS qaarkood ayaa sidoo kale si toos ah ula xiriiri kara WMS jira.Isku dhafka Softiweerku wuxuu noqon karaa mid dhib badan - laakiin aad ayey ugu qalmaan waqtiga, dadaalka iyo kharashka ku xiran ujeedooyinkaaga.
Qayb kale oo kharashka ka mid ah waa dhoofinta iyo keenista cutubka goobta wax soo saarka ee xaruntaada iyo rakibaadda goobta.Kharashyadan sidoo kale waa inay ku jiraan burburinta, qaadista iyo daadinta nidaamka jira ee hadda jira iyo shaqo kasta oo u baahan in la qabto si loogu diyaariyo aagga tignoolajiyada cusub (dabaqa la xoojiyay, raritaan shaqada tuubada sare ama madax rushaynta, rakibo dibadda ah oo leh xeryo cusub, rakibaadyo dabaqyada dhexdooda ah, iwm.).
Markaad qorshaynayso kharashaadka rakibaadda ASRS, ka fiirso goobta cutubka ku dhex yaal xaruntaada:
• Albaabadaadu ma yihiin kuwo waaweyn oo ku filan in ay geeyaan qaybaha mishiinada aagga rakibaadda ama ma in mishiinka laga furo meel kale (ama dibadda)?
• Meesha la rakibay ma bilaashbaa oo ma cad oo si sahlan baa loo guuri karaa mise cidhiidhi oo ay adag tahay in la dhaqaajiyo?
• Ma si fudud ugu heli kartaa fargeeto iyo wiishashka maqaska mise kuwan ma u baahan doonaan in la kiraysto oo la keeno goobta?
Marka mishiinka la rakibo, waxaa jira kharashyo la xidhiidha hirgelinta tignoolajiyada cusub ee hababkaaga jira.Kharashyadani waxay aad ugu xidhan yihiin xajmiga hawlahaaga iyo qoto dheeraanta is dhexgalka aad ku dadaalayso, laakiin waxaan rabaa inaan si qoto dheer u hadlo.
Ka gudubka badeecada keligiis taagan ee ASRS una gudubta wax badan oo xal ah waxay leedahay faa'iidooyin waaweyn, laakiin waxay la imaan kartaa kharashyo dheeraad ah.Midda kowaad waa waxa aan jeclahay in aan ugu yeedho qiimaha is dhexgalka mashiinka - sida alaabtu u geli doonto ASRS iyo sida ay uga soo bixi doonaan ASRS-ta.Qofku ma mas'uul ka noqon doonaa gelitaanka iyo ka soo saarista alaabta ASRS?Hadday sidaas tahay, ma waxay u baahan yihiin kor-u-qaade ergonomic ah, gaadhi-garaaca gacanta?Sidoo kale ka fiirso taageeridda tignoolajiyada – sida tignoolajiyada wax-soo-saarka iftiinka ama codka ku haga, koodhka ama sawirka QR, iwm.
Sidoo kale ka fiirso sida qaybaha ASRS ku jira loo habayn doono.Inta badan xalalka ASRS waxay u baahdaan buunshooyin, weel, iyo qaybiyayaal si ay si hufan ugu isticmaalaan booska nidaamka oo ay helaan heerar wax soo saar oo wanaagsan.Kuwaas waxaa lagu dari karaa kharashyada mashiinka, laakiin mararka qaarkood maaha - markaa hubi inaad xisaabiso kuwan.
markaa waa waqtigii qaybaha lagu shubi lahaa ASRS-ta.Ha dhayalsan wakhtiga iyo kharashka qaybaha dhaqaaqa.Tan inta badan waa la iska indhatiraa oo dhinac looga soocaa iyadoo la raacayo hab-dhaqanka "anaga lafteena ayaa sameyn karnaa".Inta aan xamaasadda ku bogaadiyay;waxay qaadataa saacado badan oo dhib badan, maalmo (mararka qaarkood toddobaadyo) in lagu habeeyo goobaha ASRS ka dibna jir ahaan looga wareejiyo qaybo ka mid ah nidaamka oo kale.Intaa waxaa dheer, marka la beddelayo xal jira, qaybo badanaa waa in loo raro kaydinta ku meel gaadhka ah ka dibna ASRS-ta.Iyadoo leh qorshe cad oo si fiican looga fakaray;Dhaqdhaqaaqa qaybo ka mid ah wuxuu dhici karaa usbuuca axada iyadoo saameyn yar ay ku yeelan karto hawlgalladaada.Dhab ahaantii waxa jira kharash la xidhiidha guuritaanka qaybo ka mid ah, laakiin inta badan waa mid mudan in qof kale bixiyo si uu kuugu sameeyo.
Hirgelinta ASRS waxay noqon kartaa mid fudud ama aad u adag iyadoo ku xiran heerka isdhexgalkaaga.Waxaa laga yaabaa inay dantaada ugu fiican tahay in la helo lataliye khabiir ah oo ka socda mashruuca soo saaraha ASRS uu maamulo dhammaan hirgelinta ASRS adiga - oo ay ku jiraan habka isdhexgalka mashiinka, qorsheynta iyo fulinta qaybaha dhaqaaqa iyo habaynta KPI-yada bilowga ah iyo warbixinta.
Waxaa jira wax badan oo la tixgeliyo marka ay timaado ASRS - doorashooyinku waa kuwo aan dhammaad lahayn.Warka wanaagsani waa isku dhafka saxda ah ee tignoolajiyada ASRS, software iyo hirgelinta waxaad heli kartaa xal kaas oo ah waxaad u baahan tahay.
Marka aad go'aamiso nidaamka ugu fiican iyo kharashka la xidhiidha, su'aasha xigta ayaa aad uga sii muhiimsan.Sideed u caddaynaysaa maalgashiga?Qalabkeena cusub ee caddaynta Qiimaha ayaa ku socon doona si uu kaaga caawiyo inaad si sax ah tan u ogaato...